Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị Atụmatụ. Flirting
site Nick Boothman
Achụ bụ ihe karịrị nanị fun ọ bụ isi. Anyị dum lanarị dị ka a umu-adabere mmadụ njikọ. Ọ bụrụ na anyị kwụsịrị achụ, ada ke ima, na reproducing anyị ga-adịghị anya na-apụ n'anya. Ma ọ bụ ezie na ọdịdị nyere anyị na ndị niile dị mkpa akụkụ dị mkpa ka anyị zọpụta onwe anyị site ikpochapu, bụghị onye ọ bụla maara otú iji ha ka ha ha kacha mma uru. Nke a bụ eziokwu karịsịa mgbe ọ na-abịa-achụ.
Charlene, a njikwa na nnukwu uwe yinye, na oku, a physiotherapist, na-abata na-ewu ewu ụlọ ịgba egwu Galapagos n'oge na-a okpokoro ke n'etiti ihe, na a oké echiche nke mmanya na-agba egwú n'ala. Mara anya na ìgwè mmadụ na-awagharị na na ebe-eju. Ma ndị inyom na-fashionably ejiji na-ele anya dị ha nwe ebe a. Dị ka Charlene asụrụ oku, ọ na-enyocha ụlọ na fiddles na ụfọdụ rụrụ strands nke ntutu isi ya. Kwa nwunye nke nkeji ọ wiggles ya ahu na, site n'oge ruo n'oge, na-ewepụta ya elbows na tebụl na emechu isi ya na aka ya, pouting na-eme anya na nwoke atụmanya na mmanya. Charlene chere na ya na-ịbụ sexy, ma ọ bụghị. Ọ na-eme ihe a ọtụtụ ndị, ma nwoke na nwanyị, na-eme mgbe ha si na na awagharị: Ọ bụ mgbagwoju anya ịbụ sexy na ịbụ mara mma. N'ezie, ya omume na-eme ka ya anya n'uko na ụmụaka, enye apụ ọmụmụ akabeghị aka ike.
Amụma, n'akụkụ aka nke ọzọ, anya ruru ala na ekewet. Ọtụtụ mgbe ọ na-anọdụ nwayọọ, isi ya lowered bụla ubé, na-ege ntị Charlene. Mgbe ụfọdụ, dị ka ọ na sips ya ọṅụṅụ, ya anya ga-atụle ihe n'elu nke iko na ọ Aga ji nwayọọ nwayọọ na-ewere na ụlọ. N'ezie, ma ọ bụrụ na ị na-ele anya, Oku yiri ka a ga na-arụ ọrụ na ọkara ọsọ nke Charlene. Enye ama ese obi ike na nchebe na-enye anya toro-elu mmekọahụ ike.
Ugbu a oku ka ahụrụ Harvey, a Ihọd ọ nso nso a hụrụ na otu ma dịghị mgbe kwesịrị ekwesị zutere. Na ọ ga-kemgbe nso zuru ezu na mgbede nụpere ya na-ekwu banyere gara na Bahamas, ma chere na ya bụ mara mma ma na-akpali (Oku hụrụ gara). Ma ugbu a, ebe ọ bụ na di na nwunye ndị ọzọ ụmụ okorobịa, leaning megide mmanya. Oku na-eme ya na ya elu ọhụụ na-echere ya na-atụgharị ya direction.
Ozugbo ọ na-eme, Oku mkpa atọ, ngọpụ onwe ya, bilie si na tebụl, na saunters n'ebe steepụ ruo na mbara ihu, nri n'oge gara aga Harvey na ndị enyi ya, hips subtly swaying, gaba ubé ala. (Ntak-lowered isi? N'ihi na anyị na ụmụ mmadụ yiri ka ịbụ ihe mmasị coyness karịa brashness.) Mgbe ahụ oku n'anya idozi na ya iche maka a ngwa ngwa oge nke kọntaktị. Ọ na-ahụ ya. Nke abụọ ọ maara Harvey chọpụtara ya, enye ese pụọ coyly. Ma tupu Harvey nwere oge na-eme, Oku anya na ya ọzọ, oge a na-emechi ya anya mgbe otú ubé dị ka ọ na-enye a ndumodu nke a ọnụ ọchị. Harvey ọkọkpọhi ozi.
Nkwa ahụ-ịdọrọ eme bụ nnọọ obi nke achụ. Ọ na-eji ike agụụ.
Gịnị nnọọ na ị hụrụ bụ ihe ndị ọkà mmụta sayensị na-akpọ a nkwa-ịdọrọ eme na akụkụ nke oku na agụụ omume na nke Harvey. Mgbe ọ na-abịa nri ala na ya, eke mkpali bụ ihe niile banyere erughị ala na ntọhapụ, ma ị na-ekwu okwu banyere egwu nkiri, ala coasters, ma ọ bụ mmekọahụ nke mmadụ. Nkwa ahụ-ịdọrọ eme na oku eji na Harvey bụ nnọọ obi nke achụ. Ọ na-eji ma ndị ikom ma ndị inyom ike agụụ, na ike bụ kpọmkwem ihe ọ na-ekwu na ọ bụ: na-elebara, mgbe ahụ na-ewere ya, mgbe ahụ na-enye ya ọzọ erughị ala, ntọhapụ, erughị ala; anya, wepụ anya, anya. Otu anya apụtachaghị ihe ọ bụla, ma oku sauntered na a-akpali agụụ mmekọahụ ụzọ, nyere Harvey a abụọ anya, na-achị ọchị na isi ya ubé lowered ka na-atụ aro coyness. All nke a na-agbakwụnye ruo n'ehieghị ụzọ na mgbaàmà nke mmasị. Ikom na ndị inyom n'ụwa nile na-eji a bụ isi na-eme, dabere na a nwaanyị saunter ma ọ bụ a nwoke swagger, esonyere anya na a ọnụ ọchị, na-egosi na kpalie mmasị onye ọzọ.
Ya mere, Oku nwere tacitly awa òkù na oge gasịrị Harvey emegharị. Ọ na-abịa elu akwa mgbago na-na mbara ihu ebe o nwere ike hoo haa ịhụ oku na-achọ ala na-agba egwú n'ala n'okpuru. Ọ na-ya na anya, ọnụ ọchị, na-ewebata ya onwe ya. “Ọṅụṅụ ọzọ?” Harvey jụrụ.
“N'ihi, ma . . .” Oku chiri ọchị na-anata, “M ebe a na a na enyi anyị na-eme ememe ya nkwalite, otú ahụ ka m n'ezie kwesịrị na-azụ ya.”
“Ọfọn,” Harvey anata, “I nwere ike na-akpọ m na-eme ememe na gị. N'ezie, M ga-enwe obi ụtọ ịzụta ụfọdụ champeenu. Ọ bụ mgbe niile mma ka a n'ezie ngọpụ ịzụta bubbly.” Ọ grins.
Ọ bụ ezie na oku maara na Charlene ga-emetụta ma ọ bụrụ na Harvey sonyeere ha, ọ na-ekwu, “Nke ahụ bụ nnọọ na-emesapụ aka nke ị, ma anyị kwere nkwa anyị onwe anyị a ụmụ agbọghọ’ n'abalị si. Ị mara, ịchụkwudo onye stof.” Ọ inclines isi ya, na-achọ n'elu ya nkenke, mgbe ahụ anya pụọ.
Harvey jụrụ, “Olee banyere echi mgbe ahụ n'otu oge ahụ, otu ebe, ma ọ bụ n'otu oge, dị iche iche ebe, ma ọ bụ . . . ?”
Oku ọchị. “Ndo, M free echi. Ma ọ bụrụ na ị na-enye m nọmba gị, Aga m akpọ gị mgbe m na-ele m oge. M n'aka na anyị pụrụ ime ihe ụfọdụ ebe.”
Nke bụ eziokwu bụ, Oku maara na Charlene ga-adịghị elekọta ma ọ bụrụ na ọ nọrọ a bit oge na Harvey. N'otu aka ahụ, ọ bụghị na-arụsi ọrụ ike na-esonụ n'abalị nile ọ zubere bụ na-asa ákwà. Gịnị oku na-eme bụ iji ihe n'eluigwe na ụwa ghọtara ụkpụrụ nke ụkọ dị ka akụkụ nke ya flirting atụmatụ.
Iwu nke Scarcity:
Olee otú Mee Onwe Gị More-akpali akpali
Dị ka a n'ozuzu na-achị, mmadụ chọrọ ka ndị ọzọ ihe ha nwere ike ghara inwe, otú a dị mfe ụzọ dịkwuo gị desirability mgbe achụ bụ iji ụkpụrụ nke ụkọ. Ihe ọ pụtara bụ na-enye echiche na ị na-ewu ewu na na ina.
Ee, ndị mmadụ (na ọbụna ụlọ ọrụ) -eji nke a ụzọ oge niile, ma mmeghachi omume anyị na-ọ bụ ya mere instinctual na anyị na mgbe kwụsị ada n'ihi na ọ. Dị ka ọmụmaatụ, onye ọ bụla maara na ọ bụ notoriously ike na abụọ na nke kacha mma ụlọ oriri na ọṅụṅụ, ma nke ahụ bụ bụchaghị n'ihi na ihe niile tebụl na-n'ezie gbaa akwụkwọ elu. N'otu aka ahụ, ejiji ndị na-emepụta dị nnọọ akpan akpan banyere ebe ha edoghi na-ahịa, na elu ha price mkpado na-eje ozi na-ewepu ọtụtụ ndị na-azụ. Mgbe redio, telivishọn, na-ebipụta akpọsa ngwá ahịa na-akọ ọtụtụ akụkọ anyị na nkwupụta dị ka “Ezie na onunu ikpeazụ,” “Ịgba abụọ kwa ahịa,” “Nrụpụta nwere oke,” na “Dọhọ mma nanị ruo Sunday,” ha na-arụ ọrụ ụkpụrụ nke ụkọ.
Na-arụ Ụkpụrụ nke Scarcity
Olee otú a ga-aghọgbu ụkpụrụ a enyemaka ka mmadụ daa na ịhụnanya na ị? Site upping gị “uru” ná mmalite nkebi nke a mmekọrịta, na-eme ka o yiri ka ị ụkọ, oké ọnụ ahịa, na uru na-achụ.
Pịa ịkọrọ na Google+ (-Emepe ọhụrụ window)
6 Mkpa ndị na-eche Banyere N'oge Mmekọahụ
+ Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na United States
+ Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na United Alaeze
+ Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na Canada
+ Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na Australia
+ Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na Ireland
+ Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na New Zealand
+ Mkpakọrịta nwoke na nwaanyị na South Africa
© Copyright 2017 Ụbọchị My Pet. Mere na site 8celerate Studio
Olee otú m mmasị m ụbọchị na ka nwere ego na-eme na-asa ákwà? foto site RBerteig CC Nke a bụ a ...